May 2022 - Page2of 21 - Shwe Pann Thee
ဆီးမထွက်ခြင်း ဓမ္မတာလွန်ခြင်းများအတွက်၁၅ မိနစ်ခန့်အတွင်း သက်သာစေတဲ့ဆေးနည်းဆီးမထွက်ခြင်း ဓမ္မတာလွန်ခြင်းများအတွက်၁၅ မိနစ်ခန့်အတွင်း သက်သာစေတဲ့ဆေးနည်း
ဆီးမထွက်ခြင်း ဓမ္မတာလွန်ခြင်းများအတွက်၁၅ မိနစ်ခန့်အတွင်း သက်သာစေတဲ့ဆေးနည်း အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ” ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်ကြီးတစ်ပါး..တဲ့ အာရောဂျံ = အနာရောဂါ၊ ပရမံ = မြတ်သော၊ လာဘံ = လာဘ်မည်၏ …လို့ မြန်မာ့ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်… ...
ဆုံးပါးသွားသော မိခင်ဖြစ်သူကို လွမ်းဆွတ်သတိရမိပြီး လမ်းပေါ်မှာမိခင်နဲ့ပုံတူလေးရေးဆွဲကာ ရင်ခွင်ထဲမှာ ဝင်အိပ်နေသော…see moreဆုံးပါးသွားသော မိခင်ဖြစ်သူကို လွမ်းဆွတ်သတိရမိပြီး လမ်းပေါ်မှာမိခင်နဲ့ပုံတူလေးရေးဆွဲကာ ရင်ခွင်ထဲမှာ ဝင်အိပ်နေသော…see more
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အနွေးထွေးဆုံးနဲ့ အလုံခြုံဆုံးက မိဘမေတ္တာသာဖြစ်ပြီး မိဘတွေနဲ့ ဝေးကွာနေရသည့်အခါ လွမ်းဆွတ်သတိရမိပြီး နွေးထွေးမှုတွေရလိုတတ်ကြသည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ အသက်၄နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ဦးသည် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မိခင်အား သတိရလွမ်းဆွတ်မိပြီးတော့ လမ်းလယ်ခေါင်မှာ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားသည့်မိခင်ပုံတူကို ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ကောင်လေးရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူသည် ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရပြီး ...
တစ်ချိန်က ရွှေမန္တလေးရဲ့ ယမကာလုလင်ကြီးများအကြောင်းတစ်ချိန်က ရွှေမန္တလေးရဲ့ ယမကာလုလင်ကြီးများအကြောင်း
အောင်ဖေတော့ ညောင်းသွားပြီ ငယ်ငယ်တုန်းက ခဏခဏ ကြားဖူးတဲ့စကား အခုမှဘဲ အဓိပ္ပါယ်သေချာသိရတော့တယ်။ မန္တလေးဆိုတာဂန္တဝင် ယမကာသမား များပေါ်ထွန်းရာမြို့ (Since –1886)Mandalay Rum ဆိုတာ ကျုံးရေနဲ့ ချက်မှ ရတဲ့ ကမ္ဘာ့ No. 1ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ...
လူတိုင်းမှာစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ် ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ် စောင့်ရှောက်နေသလဲသိချင်ရင် ဖတ်ကြည့်ပါလူတိုင်းမှာစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ် ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ် စောင့်ရှောက်နေသလဲသိချင်ရင် ဖတ်ကြည့်ပါ
လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်။ မိမိကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ရှောက်နေသလဲ သိချင်ရင် တွက်ကြည့်ပါ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စာင့်သလဲ။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်။ မိမိကို ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ရှောက်နေသလဲသိချင်ရင် တွက်ကြည့်ပါ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ် စောင့်သလဲ။ လူတိုင်း စိတ်ဝင်စားဆုံးတစ်ခုရှိပါတယ်။ အရေးကြုံရင်အားကိုးရှာစမြဲပါ။ တခါတရံ အလွန်အမင်း သတ္တိရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ ...
I Phone ကိုင်ဖို့ အပျို ဘဝကို သိန်း၂၀နဲ့ရောင်းခဲ့တဲ့ ၉တန်းကျောင်းသူI Phone ကိုင်ဖို့ အပျို ဘဝကို သိန်း၂၀နဲ့ရောင်းခဲ့တဲ့ ၉တန်းကျောင်းသူ
I Phone ကိုင်ဖို့ အပျို ဘဝကို သိန်း၂၀နဲ့ရောင်းခဲ့တဲ့ ၉တန်းကျောင်းသူ I Phone ကိုင်ဖို့ အပျို ဘဝကို သိန်း၂၀နဲ့ရောင်းခဲ့တဲ့ ၉တန်းကျောင်းသူ (မိဘတွေသတိထားနိုင်ဖို့ ရင်ဖွင့်စကားလုံးများ) ဒီစာကိုရေးသင့်မရေးသင့် စဉ်းစားနေတာကြာပြီ။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး ...
ဥပုသ်စောင့်တိုင်း ကုသိုလ်မရနိုင်ဘူး ကုသိုလ်ရအောင် ဥပုသ်စောင့်တတ်ဖို့လိုတယ်ဥပုသ်စောင့်တိုင်း ကုသိုလ်မရနိုင်ဘူး ကုသိုလ်ရအောင် ဥပုသ်စောင့်တတ်ဖို့လိုတယ်
ငရဲကိုသွားမဲ့ ဥပုသ်သည် ဖတ်ကြည့်နော် တစ်ခါတုန်းကတာဝတိံသာနတ်ပြည်က နတ်သမီးလေးတစ်ပါးဟာလူ့ပြည်ကို နတ်မျက်စိနဲ့ ကြည့်မိသတဲ့။အဲဒီလိုကြည့်မိတဲ့အခါ လူ့ပြည်မှာ ဝါတွင်းကာလဖြစ်တာမို့ လူတွေအများကြီး ဥပုသ်စောင့်ကြတာကိုတွေ့ရတာပေါ့။ အဲဒီအခါ နတ်သမီးလေးက သိကြားမင်းကြီးကို အရှင်သိကြားမင်း လူ့ပြည်မှာ လူတွေဒီလောက် ဥပုသ်စောင့်ကြရင် သူတို့ကွယ်လွန်တဲ့အခါ နတ်ပြည်ရောက်ကြမှာမို့နတ်ပြည်မှာ ...
” ထမင်းစားပြီးနောက် မလုပ်သင့်သည့် အန္တရာယ် (၈)ရပ်”” ထမင်းစားပြီးနောက် မလုပ်သင့်သည့် အန္တရာယ် (၈)ရပ်”
သင်ဒါတွေ သိပါသလား။ ဖတ်ရှုပြီး လိုက်နာဆင်ခြင်ပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်ရော၊မိသားစု နှင့် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးကို လည်း လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးလိုက်ပါ . နော်။ (၁) ဆေးလိပ်မသောက်ပါနှင့်။ ထမင်းစားပြီးနောက် စီးကရက် ၁-လိပ်သောက်ခြင်းသည် သာမန်အချိန် စီးကရက် ၁၀-လိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ညီမျှပြီး၊ ...
ပုရိသတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေအောင် ထက်မြက်လွန်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာရပ်များပုရိသတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေအောင် ထက်မြက်လွန်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာရပ်များ
ပုရိသတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေအောင် ထက်မြက်လွန်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာရပ်များ ပုရိသတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေအောင် ထက်မြက်လွန်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာရပ်များလူတိုင်းမှာ ဘယ်လိုလူတွေကိုတော့သဘောကျလိုက်တာဆိုတာမျိုး ရှိတတ်ကြပါတယ်။သူ့ပုံစံလေးကတော့ ငါ သဘောကျတဲ့ ပုံစံမျိုး ဆိုသလို လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံတွေ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ ...
ချမ်းသာချင်တဲ့လူတိုင်း အတုယူသင့်တဲ့ တရုတ်ကုန်သည်တွေရဲ့ လှည့်ကွက်နဲ့ စီးပွားရှာကြပုံများချမ်းသာချင်တဲ့လူတိုင်း အတုယူသင့်တဲ့ တရုတ်ကုန်သည်တွေရဲ့ လှည့်ကွက်နဲ့ စီးပွားရှာကြပုံများ
ချမ်းသာချင်တဲ့လူတိုင်း အတုယူသင့်တဲ့ တရုတ်ကုန်သည်တွေရဲ့ လှည့်ကွက်နဲ့ စီးပွားရှာကြပုံများ တလောက ရွှေလီမြစ်ထဲ ပြောင်းဖူးတွေသွန်ပစ်တဲ့သတင်းတွေ ဖရဲသီးတွေ ရောင်းမရလို့ဆိုပြီး ဒါးနဲ့ခုတ်ပြီး လွှင့်ပစ်တဲ့ ဗီဒီယိုတွေ တက်လာတော့ ကျနော်တရုတ်ပြည်မှာ သွားနေခဲ့ဖူးတဲ့အချိန်ကိုသတိရတယ်၊ တရုတ်တွေက စီးပွားရေးကို စီးပွားရေးလိုဘဲလုပ်ပါတယ် ကျနော့သူငယ်ချင်းပြောဖူးတာက ...
ကလေးအယောက် ၂၀၀ ကျော်မွေးပြီး အသက် ၂၅၆ နှစ်ထိ အသက်ရှည်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားကလေးအယောက် ၂၀၀ ကျော်မွေးပြီး အသက် ၂၅၆ နှစ်ထိ အသက်ရှည်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ Li Chinf-yuen လို့ခေါ်တဲ့ အသက်အရမ်းရှည်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Li Chinf-yuen ကိုတော့ ၁၆၇၇ ခုနှစ်က တရုတ်နိုင်ငံဆီချန်ခရိုင်၊ကျုဂျီယန်ဇီအန် ပြည်နယ် မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Li ဟာ အသက်ဆယ်နှစ်လောက်ထဲက ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ သစ်ဥသစ်ဖုတွေ ရှာဖွေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ပြီး ...